शरिरका अंगबाटै अत्याधुनिक संगीत
२९ बैशाख - अला वार्दी संसारका एक त्यस्ता अपवाद प्रतिभा हुन् जस्ले आफ्नो अद्भुत कलाले मान्छेहरुलाई अचम्मीत बनाइदिएका छन्। साउदी अरेबियामा जन्मिएका तीसबर्षे युवक ‘अ क्यापेला आर्टिस्ट’ हुन्।
६ सय किलोका यी व्यक्तिको तौल घटाउने शल्यक्रिया सफल
२७ बैशाख - विश्वकै सबैभन्दा धेरै तौल भएका व्यक्तिको तौल घटाउने शल्यक्रिया सफल भएको छ। लगभग ६०० किलो तौल भएका मेक्सिकोका ३२ वर्षीय जुआन पेड्रो फ्र्यांकोको यस्तो शल्यक्रिया गरिएको हो।
पत्ता लाग्यो कपाल झर्ने कारण
२६ बैशाख - युवावस्थामै सेताम्य फूलेका कारण तपाईं ऐना हेर्न डराउनुहुन्छ? वा कपाल काट्न जाँदा कपालको संख्याभन्दा धेरै पैसा तिर्नुपरेकोमा चिन्तित बन्ने गर्नुहुन्छ? यदि त्यसो हो भने अब धेरै समय चिन्ता लिनु नपर्ने देखिएको छ। वैज्ञानिकहरुले दुर्घटनावश यसको कारण...
यस्ता छन्, इरानका मेसी
२० बैशाख - फुटबलप्रेमीका लागि लियोनल मेसी अपरिचित छैनन्। धेरैको नजरमा विश्वकै उत्कृष्ट यी अर्जेन्टिनी फुटबलरजस्तै देखिने एक व्यक्तिको फोटो अहिले भाइरल भएको छ।
लण्डन म्याराथन सकिएको तीन दिनपछि आधाबाटो पुग्दैछन् यी 'गोरिल्ला म्यान'
१३ बैशाख - ४२.१९५ किलोमिटरको लण्डन म्याराथन गत २३ अप्रिलका दिन सम्पन्न भयो। सो म्याराथनमा पुरुषतर्फ प्रथम हुने व्यक्तिले दुई घण्टा ६ मिनेटमा निर्धारित सम्पन्न गरे र घर गए। तर त्यही म्याराथनमा भाग लिएका एक व्यक्ति भने भर्खरै आधा दूरी पार गर्दैछन्।
पचास वर्षीय वृृद्ध जो २५ वर्षदेखि घाँस खाएर बाँचेका छन्
१० बैशाख - पाकिस्तानको पञ्जाबमा रहेको गुज्रनवाला जिल्लाका ५० वर्षीया मेह्मुद बुत्त विगत २५ वर्षदेखि घाँस खाएर बाँचीरहेका छन्। उनलार्इ यो लत जस्तै भइसकेको छ।
अनसनमा बसेकालाई चुनौती दिन जेलबाहिर बार्बिक्यु पार्टी
९ बैशाख - कोही अनसन बसे उसलाई गलाउन के के गरिएला? माग पूरा गर्ने, यातना दिने, जबर्जस्ती खाना खुवाउने वा औषधीको सहारामा जिउँदो राख्ने। तर इजरायलका दक्षिणपन्थीहरुले नयाँ उपायको खोजी गरेका छन्।
ओथारो बसेर चल्ला कोरले अब्राहमले
८ बैशाख - मान्छे ओथारो बसेर चल्ला कोरल्योभन्दा झट्ट विश्वास नलाग्न सक्छ, तर तलका यी तस्वीर हेर्नुस् त, तपाईं चकित हुनु हुनेछ। फ्रान्सका अब्राहम पोइन्सेभलले माऊ कुखुराले जस्तै ओथारो बसे अनि चल्ला कोरले। अहिले उनको यो उपलव्धिको तस्वीर कैद गर्ने र अन्तरवार्ता...
‘पोर्न’ हेर्दा सम्बन्धविच्छेदमा वृद्धि
२ बैशाख - अत्याधिक पोर्न फिल्म हेर्नु मानसिक स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैँन। तर यसले मानिसको सामाजिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्छ भन्ने सुन्दा तपाईंलाई अचम्म लाग्न सक्ला। विवाहितहरुले पोर्न हेर्न थालेपछि सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना दोब्बर हुने एक अध्ययनले...
बेक्ह्याम दम्पत्तीद्वारा पाँच वर्षीया छोरीको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता
३१ चैत - पूर्व म्यान्चेस्टर युनाइटेड स्टार फुटबलर डेविड बेक्ह्याम र उनकी फेसन डिजाइनर पत्नी भिक्टोरिया बेक्ह्यामले आफ्नो पाँच वर्षीय छोरी हार्पर बेक्ह्यामको नाममा ट्रेडमार्क दर्ता गराएका छन्। उनीहरुले बेलायत र युरोपमा सो ट्रेडमार्क दर्ता गराएका हुन्।
कुकुर र बिरालोको मासु खान ताइवानले लगायो प्रतिबन्ध
३० चैत - कुकुर र बिरालोको मासु उपभोगमा ताइवानले प्रतिबन्ध लगाएको छ। त्यहाँको व्यवस्थापिकाले मंगलबार पशु सुरक्षा कानुन संशोधन गरेपछि यस्तो व्यवस्था लागु हुने भएको हो।
चम्ल्याहालाई भर्ना लिन चर्चित विश्वविद्यालयबीच यस्तो हानथाप
२६ चैत - विख्यात कलेजमा भर्ना हुन पाउनु तीक्ष्ण विद्यार्थीका लागि पनि चुनौतीको कुरा हो। तर अमेरिकाको ओहायोका चम्ल्याहा दाजुभाइलाई हार्वार्ड, यलजस्ता विख्यात कलेजहरुले भर्ना लिन स्वीकार गरेका छन्।
किर्तीमानी मूल्यमा गुलाबी हिरा बिक्री
२३ चैत - एक गुलाबी हिरा किर्तीमानी मूल्यमा बिक्री भएको छ। हङकङमा चो ताइ फुक नामक एक गहना गृहले 'पिंक स्टार' नामक ५९.६ क्यारेटको सो हिरा ७.१ करोड अमेरिकी डलरमा किनेको हो। पाँच मिनेट लामो लिलामी प्रक्रियापछि सो हिरा बिक्री भएको हो।
१९ चैत - पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण वयष्क मानिसको तौल अनुमानित रुपमा २८.७ करोड टन हुन्छ। त्यसमा बच्चाबच्चीको तौल सात करोड टन जोडिदिँदा पनि त्यो वर्षभरीमा पृथ्वीका माकुराको खानाको तौलभन्दा कम हुन पुग्छ। अर्को शब्दमा माकुराले पूरै मानिसहरुलाई खाइसक्दा पनि उनीहरु...
मेक्सिकोको मेट्रोमा ‘पेनिस सिट’
१८ चैत - मेक्सिकोको मेट्रोमा हालै प्रयोगमा आएको ‘पेनिस सिट’ले सबैलाई अचम्ममा पारेको छ। सिटमाथि बनाइएको लि‌ंगजस्तो आकृति महिला यात्रीका विरुद्ध हुने यौन उत्पीडनका विरुद्ध ध्यानाकर्षण गर्नका लागि बनाइएको हो।
बिहे गर्न अवतारी कर्मपा लामाले त्यागे भिक्षु जीवन
१७ चैत - एक अवतारी धर्मगुरुले विवाह गर्नका लागि भिक्षु जीवनको त्याग गरेका छन्। सानैदेखि आफूलाई कर्मा काग्यु सम्प्रदायको कर्मापा लामाको अवतारी दाबी गर्दै आएका थिन्ले थाए दोर्जेले ३३ वर्षको उमेरमा भिक्षु जीवन त्याग गरेर विवाह गरेको घोषणा गरेका हुन्।
मानिस–मुसाको संगत, यसरी भयो सुरुवात
१५ चैत - घरमा लत्ताकपडादेखि तारसमेत काट्ने मुसा मार्नकै मानिसले पासो थाप्ने, विष राख्ने र बिरालो पाल्ने गर्दछन्। मानिस र मुसाबीच दुश्मनी मात्र छैन, कतिले घरमै मुसालाई पालेका छन्। मेडिकल अनुसन्धानमा त मुसामाथि धेरै नै प्रयोग भएका छन्। मानिस र मुसाको...
टाइटानिक डुबेको ठाउँमा पर्यटक लगिने
९ चैत - १५ अप्रिल १९१२ मा साउथ ह्याम्पटनबाट न्युयोर्कका लागि जाँदै गरेको टाइटानिक जहाज डुब्यो। सो दुर्घटनामा १५ सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भयो। घटनाको एक शताब्दीभन्दा बढी समयपछि एक कम्पनीले पर्यटकहरुलाई जहाज दुर्घटनास्थलको यात्रा गराउने भएको छ।
नाक चुच्चो या थेप्चो हुने कारण जलबायु
५ चैत - कसैले मजाकस्वरुप भनेका छन्, यदि क्लियोपेट्राको नाक अलिकति छोटो भएको भए संसारको रुप नै अर्को हुन्थ्यो। यो भनाइले क्लियोपेट्राको सुन्दरता मात्र होइन मानिसको अनुहारमा नाकको भूमिकालाई पनि राम्ररी चित्रण गर्दछ।
राष्ट्रपति भवनमा कुकुर छोड्दा पूर्वराष्ट्रपतिमाथि मुद्धा
२ चैत - संवैधानिक अदालतले पदच्युत गर्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रपति भवन छोडेकी दक्षिण कोरियाली पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्वेन हाई एक पटक फेरि चर्चामा आएकी छन्। यस पटक उनी राष्ट्रपति भवनमा आफ्ना नौ ओटा कुकुर छोडेको कारण समाचारको विषय बनेकी हुन्।
जन्मेको दुई सय वर्षपछि गृहनगरमा मार्क्सको सालिक ठडिँदै
१ चैत - अर्को वर्ष कार्ल मार्क्सको दुई सयौँ जन्मजयन्ती मनाउने तयारी हुँदैछ। सोही अवसरमा मार्क्सको जन्मस्थान जर्मनीको ट्रायर नगरमा २१ फिट (६.३ मिटर) अग्लो सालिक खडा हुने भएको छ। महिनौँसम्मको छलफलपछि ट्रायर नगर परिषदले उनको सालिक राख्ने पक्षमा सोमबार मतदान...
सामाजिक सञ्जालका कारण एक्लोपनमा वृद्धि
२३ फागुन - भनिन्छ, सामाजिक सञ्जालको विकासपछि विश्व एउटा गाउँमा खुम्चिएको छ। सञ्चारमा यसले क्रान्ति ल्याएको विश्वास गरिन्छ। तर ट्वीटर, फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालका कारण पहिलेभन्दा बढी मानिसले एक्लोपनको महसुस गर्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
ट्रम्पको व्यंग्यात्मकथा सहलेखनमा बाल्द्विन
१९ फागुन - अभिनेता एलेक बाल्द्विन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नक्कल गर्न माहिर मानिन्छन्। एनबिसी टेलिभिजन नेटवर्कमा प्रसारण हुने ‘स्याटर्डे नाइट लाइभ’ मा मन्दबुद्धि, आक्रमक, अहंकारी राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्पको दुरुस्त नक्कल गरेर दशौँ लाख मानिसको मन...
एक मिनेटमा ४२ पोटी लसुन खाएर विश्वकीर्तिमान
१७ फागुन - विश्व फुटबल महासङ्घ (फिफा) मा आबद्ध दुई सय नौ देशको नाम ६१ सेकेन्डमा खररर्र वाचन गरी ‘गिनिज बुक अफ ओल्र्ड रेकर्ड‘मा नाम लेखाउन सफल कैलालीका भरत विष्टले अर्को अनौठो प्रतिभा देखाएका छन्।
ह्वीलचेयरमा बसेर सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन पुगिन् यी सुन्दरी
१३ फागुन - सुन्दरताको विषय जहिल्यै विषयगत हुन्छ। त्यसैले नै सुन्दरी प्रतियोगिताहरुको आलोचना हुने गरेको छ। तर हालै अष्ट्रेलियाको एक सुन्दरी प्रतियोगितामा ह्वीलचेयरमा बसेकी महिलाले सहभागिता जनाएकी छन्। २६ वर्षीय जस्टिन क्लार्क ह्वीलचेयरमा बसेर मिस वर्ल्ड...
युरोपियन युनियनले गलत अमेरिकी झण्डा टाँगेपछि
१० फागुन - अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेन्स सोमबार ब्रसेल्सस्थित युरोपियन युनियन काउन्सिल भवनमा पुगे। त्यहाँ उनी इयु काउन्सिल प्रमुख डोनाल्ड टस्कसँग गफ गरिरहेका देखिए। यद्यपि आफू उभिएको स्थानपछाडि टाँगिएको अमेरिकी झण्डा गलत भएको उनले मेलो पाएनन्।
बिक्यो हिटलरको फोन
९ फागुन - दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा जर्मनीका तानाशाह हिटलरले प्रयोग गरेको फोन अमेरिकामा लिलाम भएको छ। लिलामीमा सो फोन २ लाख ४३ हजार डलरमा बिकेको हो।
हिटलरको फोन करोडौं रुपैयाँमा लिलाम हुने
८ फागुन - दोस्रो विश्वयुद्धमा एडल्फ हिटलरले प्रयोग गरेको फोन अमेरिकामा लिलाम हुने भएको छ। रातो रंगको सो फोनमा हिटलरमा नाम लेखिएको छ। उक्त फोन सन् १९४५ मा बर्लिनस्थित हिटलरको बंकरमा भेटिएको थियो।
भ्यालेन्टाइनको अवसर पारेर भारतमा धुमधामसँग गधाको बिहे
४ फागुन - भारतको बेंगलुरुस्थित कब्बोन पार्कमा मंगलबार भ्यालेन्टाइन डे को अवसर पारेर दुई गधाको विवाह गरिएको छ। प्रेमप्रति सम्मान प्रकट गर्न तथा मानिसलाई प्रेम दिवस मनाउनका लागि उत्प्रेरित गर्न गधाको विवाह गरिएको जनाइएको छ।
५० वर्ष भारतमा अड्किएका चिनियाँ व्यक्ति घर फर्किए
२९ माघ - ५० वर्षभन्दा बढी भारतमा अड्किएका एक चिनियाँ व्यक्ति अन्ततः घर फर्किएका छन्। सन् १९६३ मा चिनियाँ जनमुक्ति सेनामा कार्यरत वाङ ची झुक्किएर भारतीय सीमानामा प्रवेश गरेपछि भारतीय सेनाको गिरफ्तारीमा परेका थिए।